11. september 2021 - NorSom News
Saadaalin: Qorshihii Støre oo qiil-qiil kujiro, labo(2) maalin kahor doorashada baarlamaanka.
Norsomnews - 11. september 2021
Qoyska Abdullahi Yabarow & Khadiijo Coloow: Qoysaska soomaaliyeed si wadajir ha u dhiibteen codkooda
Wax badan ka ogow xisbiga Miljøpartiet De Grønne – MDG. Waxaa noo marti ah Suhur oo siyaasi soomaali
Sh. Xuseen: Codbixintu waa masuuliyad bulsho oo ay muhiim tahay in la guto.
Dr. Abdi Geele: Codeyntu waa awood bulsho oo xisbiyada lagula xisaabtamo: Codkiina dhiibta
Dr. Mohamed Macalin iyo Xasan Samow: Fariin ku socoto soomaalida Asker iyo guud ahaan Norway.